Momba anay | Shijiazhuang QiAOQi Glass Product Co., Ltd.
Tongasoa eto QioaQi
QiAOQi Mpanamboatra dia mihevitra ny kalitao ho anton-javatra fototra amin'ny fampandrosoana orinasa. Manomboka amin'ny fanodinana ireo akora simika hatramin'ny fahavitan'ny vokatra farany dia manolo-tena amin'ny kalitao, ny fanavaozana ary ny faniriana hihoatra ny filan'ny mpanjifa izahay. Manana rafitra fifehezana kalitao henjana izahay, ny vokatra rehetra dia ho voamarina tsara farafahakeliny in-3 (mandritra ny famokarana, vita ny famokarana ary alohan'ny hametrahan'ny QC) izay ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany dia manohy mitory amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana ilana azy izahay ahafahana manome toky ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
QiAOQi Manufacturer dia manana trano fitehirizam-bokatra maherin'ny 5000 sqm hametrahana entana. Ireo mpiasan'ny trano fanatobiana entana matihanina dia tsy hoe mitazona ny fahadiovany fotsiny, manamarina ny isa, fa manome antoka ny fonosana. Ankoatr'izay, ny tahiry entana rehetra arakaraka ny baiko isan-karazany. Ny fikatsahantsika tsy tapaka hamoronana vokatra tsara kalitao.
Feno fientanam-po sy tanjaky ny ekipa Sales Sales
Ekipa mpivarotra angovo tanora sy matihanina miasa 7X24hours, izay afaka manome valiny ara-potoana sy marina.
Raha vaovao ianao amin'ity orinasa ity dia hanome anao torohevitra matihanina indrindra momba ny famokarana izahay.
Raha matihanina amin'ity orinasa ity ianao dia hatolotray anao ny vidin'ny fifaninanana sy ny fotoana fandefasana tsara indrindra.
Ny mpiasa ao amin'ny QiAOQi dia manantena ny hifanome tanana aminao hamorona ho avy mamiratra amin'ny fahendrentsika, ny toetranay ary ny vokarinay.